Antsafa · Aogositra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Antsafa · Aogositra, 2018
Tantara mikasika ny Antsafa tamin'ny Aogositra, 2018
Fanadihadiana Tranga 12 Aogositra 2018
Ny fitadiavana vaovao amin'ny tambajotra ao Shina dia mety midika ho fampiasana kokoa ny rakipahalalana tsy mampidi-bola an'ny tambajotra Baidu, mitaha amin'ny fampiasana ny rindrambaiko malalaka Wikipedia. Ny toniandahatsoratra, Addis Wang, dia manana tanjona amin'ny fanairana ny ao Shina momba ny Wikipedia (sy ny toetsaina fizaràna fahalalana ao aminy) amin'ny alalan'ny fampiasana ireo media sosialy miaraka amin'ilay fampiasa malaza Weibo.
Kathryn Ward amin'ny tombotsoan'ny famahanana bilaogy ho an'ny vehivavy Bangladeshi
Mediam-bahoaka 12 Aogositra 2018
Ho an'ity antsafa notanterahan'ny Rising Voices ity dia mihaino ny resadresaka mivantana niarahana tamin'i Kathryn Ward, mpanorina ny Nari Jibon avy ao amin'ny fandaharan'i Big Muddy ao amin'ny onjam-peo WDBX any Carbondale, Illinois, isika.
Antsafa niarahana tamin'i Jamila Venturini ao amin'ny Friends of Januária
Mediam-bahoaka 10 Aogositra 2018
Iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa tohanan'ny Rising Voices Friends of Januária i Jamila Venturini, mpanao gazety Breziliana. Ao anatin'ity lahatsarin'ny antsafa niarahana taminy ity izy niresaka ny antony nanombohana ny tetikasa fanentanana ny fampitam-baovaon'olo-tsotra any amin'ny tanànan'i Januária.
Mediam-bahoaka 08 Aogositra 2018
Mediam-bahoaka 06 Aogositra 2018
Dimy minitra nifampiantsoana telefônina tamin'i Eddie Avila
Tamin'ity herinandron'ny 22 febroary 2008 ity izahay nanomboka fanasongadinana vaovao ao amin'ny Rising Voices hifandraisanay tsy tapaka amin'ireo mpitarika ny tetikasa 10 ivelan'ny Rising Voices. Tamin'i Eddie Ávila izay ao Etazonia amin'izao fotoana izao hanolotra ny ny Voces Bolivianas ao amin'ny We Media conference ao Miami, Florida no nifampiresahay voalohany.
Mediam-bahoaka 04 Aogositra 2018